Guddoomiye Jawaari” waxaan xooga saaraynaa mudada uu kalfadhiga furanyahay arimaha barlamaanka horyaallo” | Somali National Television - sntv.so
Home GOLAHA SHACABKA Guddoomiye Jawaari” waxaan xooga saaraynaa mudada uu kalfadhiga furanyahay arimaha barlamaanka horyaallo”
Guddoomiye Jawaari” waxaan xooga saaraynaa mudada uu kalfadhiga furanyahay arimaha barlamaanka horyaallo”
Mudane; Jawaari ayaa sheegay in muddada yar ee ay haystaan inta lagu gudo jira kalfadhigaan ay isku dayi doonaan , dib u dejinta dastuurka, habaynta hay’adaha difaaca Dalka, sal u dhigidda fadaraalaynta Dalka , Dimoqaraadiyeynta Soomaaliya, ka go’aan gaaridda maqaamka Magaala madaxda Dalka ee Muqdisho.
Wuxuu guddoomiye Jawaari ammaan ballaadhan usoo jeediyay Baarlamanka 10 aad oo uu ku tilmaamay inay ka shaqa badan yihiin kii 9aad 42%, wuxuuna intaa raaciyay inay meel mariyeen muddadii yarayd ee ay shaqaynayeen 33 go’aan, halka Baarlamankii kan ka horreeyayna ay meel mariyeen 14 oo keliya.
Guddoomiye Jawaari ayaa ugu dambayntii ka codsaday R/wasaaraha iyo guddiyada u xilsaaran dib u heshiisiinta iyo dib u eegista Dastuurka inay dardar geliyaan soo gudbinta Ajandayaashaas, si uu Baarlamanku ugu doodo una meel mariyo, isagoo codsaday in lagu dhaqaaqo ballan qaadyadii ay hore u samaysay xukuumadda.
Previous articleSomali Government Gratifies Arab League Statement On Berbera Port Deal
Next articleGudoomiyaha Aqalka Sare “si loo gaaro Midnimo dhab ah waa muhiim in la helo dib u heshiisiin dhab ah”